अब व्यापारमा खुकुलो नीति आवश्‍यक परिसकेको छ
अर्थ नीति अन्तर्वार्ता
भागवत भट्टराई काठमाडाैं, ४ वैशाख
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा करिब ४५ प्रतिशत भन्सार राजस्वबाट उठ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आवकाे ९ महिना बित्दा भन्सार राजस्व जम्मा ३ सय अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको छ । औसत रूपमा दिनमा डेढ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेकाेमा फागुनकाे अन्तिम साताबाट केही कमी आएको छ । चैतमा पहिलो १० दिन १ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेकाे थियाे । त्यसपछि भने राजस्व संकलन ठप्पप्रायः छ । चैत महिनालाई औसतभन्दा बढी आर्थिक कारोबार र व्यापार हुने महिना मानिन्छ तर चैतमा आएको व्यापारिक अवरोधका कारण राजस्व लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बन्दाबन्दीका कारण व्यापारमा कस्तो समस्या परेको छ, अत्यावश्‍यक सामान ल्याउन समस्या छ कि छैन, काेराेना महामारीका कारण राजस्वमा कस्तो प्रभाव देखिएला र हालसम्म राजस्व संकलनकाे अवस्थालगायत विषयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालसँग शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, साेही कुराकानीकाे सम्पादित सार :
बन्दाबन्दी भएको पनि २२ दिन पुगिसकेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
अहिले नेपाल मात्रै हाेइन, नेपालको छिमेकी राष्ट्र तथा मुख्य व्यापार साझेदार राष्ट्र भारतमा पनि बन्दाबन्दी छ, जसले आर्थिक क्रियाकलपाहरू निकै सुस्त बनेका छन् । यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत परेको छ ।
अहिले हामीले आजलाई चाहिने वस्तु र आजलाई नचाहिने वस्तुको सूची बनाएर कारोबार गरेका छौँ । आजलाई चाहिने वस्तुमा अत्यावश्यक वस्तु तथा खाद्यान्न हो भने आजलाई नचाहिने वस्तुहरूको सूची धेरै होला । हामीले अहिले ठूलाठूला मेसिन ल्याउन खोजेका छैनाैँ । गाडी ल्याउँँदैनौँ, कार ल्याउँदैनाैँ । यस्तै प्रकारका धेरै सामान ल्याउँदैनाैँ । तर, डिजेल, पेट्रोल, खाद्यान्न, फलफूल तरकारीलगायतका अत्यावश्यक उपभाेग्य सामग्री ल्याउँछौँ । आजलाई चाहिने सामान पर्याप्त रूपमा आएको छ । तर, खपत सामान्य अवस्थामा जस्तो हुन सक्दैन । त्यस कारण सामान्य अवस्थामा जति आयात गर्नुपरेको छैन ।
सूचीवद्ध गरेर आजलाई मात्रै चाहिने सामान ल्याउँदा कति सामान घट्दो रहेछ र राजस्वमा कस्तो प्रभाव देख्नुभएको छ ?
चैत महिना सरकार तथा व्यावसायिक जगतका लागि मुख्य पिक टाइम हो । आर्थिक गतिविधिको मुख्य महिना र आशा पालिने महिना हो । तर, यही महिनामा महामारीका कारणले गर्दा गर्तवर्षको भन्दा अवस्था धेरै नाजुक छ । गतवर्षको चैत महिनाको तुलना गर्ने हो भने आयातमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै ह्रास आएको छ । राजस्वमा समस्या झन् धेरै देखिएको छ । गतवर्ष यही चैत महिनामा हाम्रो भन्सार राजस्व २७ अर्ब रूपैयाँ उठेको थियो । यो चैत महिनामा मात्रै १२ अर्ब रूपैयाँ उठ्यो ।
११ चैतबाट बन्दाबन्दी सुरू भएको थियो, त्यसपछिको असर कस्तो छ ?
१० चैतसम्मको हाम्रो दैनिक भन्सार राजस्व १ अर्ब रूपैयाँका दरले औषत १० अर्ब रुपैयाँ उठेकाे थियो । तर, ११ चैतदेखि पछि २० दिनको अवधिमा भने जम्मा २ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ ।
हामीले अहिले नागरिकको अत्यावश्यक सामग्रीलाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छाैँ । तर, व्यापार चलायमान भएन भने धेरै दुःख भोग्नुपर्छ । यस विषयमा हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएर अगाडि बढ्नु आवश्‍यक छ । हामीले ३ साताको लकडाउन भाेगिसकेका छौँ । अब झन्डै २ साता बाँकी छ । अब पनि आर्थिक गतिविधि कसरी अघि बढ्छ, ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई ध्यान दिएर व्यापारमा केही खुकुलो नीति अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्ने हाे भने पनि काेराेना महामारीले आक्रान्त भएका राष्ट्रले समेत केही सहजीकरण गरेको देखिएको छ ।
यो हाम्रो जीवनको पहिलो घटना हो । हामीले केही समय बादल लागेपछि घाम लाग्ला भन्ने सोचेका हुन्छौँ । किनकि हामीले देखेको त्यही हो तर त्यो बादल धेरै समयसम्म लाग्यो भने यसको असर ठूलो हुन सक्छ । हो, हामी डराउनु स्वाभाविक हो । तर, डराएर आत्तिनुचाहिँ राम्रो हाेइन । व्यापार (ट्रेड) एकपटक रोकियो भने अर्को पटक व्यापार तान्नका लागि धेरै नै पापड बेल्नुपर्छ । हामीले यस विषयलाई ध्यान दिन जरूरी छ । ट्रेडलाई सकेसम्म नरोकौँ भन्ने नै मेरो मान्यता हो ।
तत्काललाई आवश्‍यक पर्नेभन्दा पनि मालवस्तु जति आएका हुन्छन्, गन्तव्यसम्म कम्तीमा सुरक्षित तवरले पुग्न दिनुपर्छ ।
यसको मतलब भन्सारबाट सामान भित्रिएपछि समस्या हो ?
हो, कतिपय बुझाइमा समस्या देखिएको हो । हामीले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँछाैँ, समुन्द्र र रेलको प्रयोग हुन्छ । दिनको ३ पटक रेलमा करिब १००/१०० कन्टेनर सामान आएको हुन्छ । त्यहाँ सबै दैनिक आवश्‍यकताका वस्तु नहुन पनि सक्छन् । त्यस्तो सामान भन्सार पास गरेपछि त्यहाँ रोकेर राख्ने अवस्था हुँदैन, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ । तर, बाटो, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि र मिडियाले पनि दैनिक आवश्‍यकतामा नपरेका सामान किन ल्याइयो भनेको यदाकदा सुनिन्छ । यसो गर्नु राम्रो हाेइन । यस विषयमा हामीले गृहसचिव, वाणिज्य सचिव, स्थानीय प्रतिनिधि र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।
चालू आवमा सुरूवातदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घटेको छ । चैत महिनामा त परिमाणको हिसाबले ५० प्रतिशत र रकमका हिसाबले थप धेरै कम व्यापार भएको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र राजस्वमा कति कम हुन्छ, अनुमान गरिएको छ ?
अहिले नै हामीले अनुमान गरिसकेका छैनौँ । हामीले यस आवमा ५ खर्बको भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका थियौँ । ९ महिना बित्दा अर्थात् चैत मसान्तसम्म अझै ३ खर्ब रूपैयाँको राजस्व उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा २ खर्ब रूपैयाँको राजस्व उठाउन सकिने स्थिति छैन । अब पनि लकडाउन लम्बिने र व्यापारमा पनि यथास्थिति रहने हो भने ४० प्रतिशतसम्मको घाटा हामीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो त भन्सार राजस्वको कुरा हो । भ्याटमा थप ठूलो असर गर्छ । आयकर पनि कम उठ्छ । जसले गर्दा हामीले अहिले गरेको खर्चको स्रोत जुटाउन पनि समस्या पर्न सक्छ । बजेटमा असर गर्न सक्छ । त्यसैले व्यापारिक गतिविधि खुकुलो पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
अत्यावश्‍यक वस्तुको आयातमा हाल समस्या छैन भन्नुभयो । तर, निर्यातको अवस्था के छ ?
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको त्यति ठूलो योगदान त पुगिसकेको छैन । आयात व्यापारजस्तै निर्यात व्यापारमा पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ । कतिपय वस्तुको निर्यात भएको अवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ४, २०७७, १६:३१:००
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गर्‍यो झण्डै १० अर्ब खर्च